Igumbi elinye elizolileyo lomntu omnye kuphela - ligonyiwe - I-Airbnb
Igumbi elinye elizolileyo lomntu omnye kuphela - ligonyiwe
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguAnja
Ligumbi elikhanyayo elinebhedi enye, idesika kunye newodrophu, iishelfu kunye neengubo. Umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla usegumbini lokuhlambela. I-Friedrichshafen imalunga nemizuzu eyi-9 ngemoto. Kukho indawo yokupaka kwisitrato sethu. Ichibi laseConstance ungafikelela kulo ngemoto kwimizuzu eyi-10.
Usebenzisa igumbi lokuhlambela kunye nomyeni wam, ngoko ikhitshi negadi. Kukho ikati enye ehlala nathi. Ndiqeshisa ngeflethi kangangeeveki eziyi-2 ubuninzi. Ngumntu nje omnye! Nceda kungabikho bantu batshayayo!
Ukuba ufuna ukuchitha ezinye iintsuku apha kwiflethi yethu ukuze ujikeleze ichibi uzodinga imoto. Nangona kunjalo, kukho ibhasi ngeyure nganye eya esixekweni kwaye ngokunjalo nasechibini. Indlu, esekupheleni kwesiphelo sesiphelo, ijikelezwe ziiyadi zamahashe amasimi ee-apile anoxolo kakhulu kwaye azolile. Ukuba uyathanda ukuphumla - nantsi indawo oya kuyo!
Ngaphandle koko sinegadi entle kunye nethafa, onokuyisebenzisa kwiindawo ukuba imozulu ilungile.
Kufuphi malunga nemizuzu emi-5 ngeenyawo ungafikelela kwigrosari encinci kunye nehotele / indawo yokutyela ngokunjalo.
Ekuseni ndihlala ndisekhaya, ngokuhlwa ngokunjalo. Ndijonge phambili ukukunceda, ukukucebisa into okanye ukunika iingcebiso. Ngaphandle koko uya kundifumana kwiselula yam.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Friedrichshafen